Lahatsoratra nataon'i Andy Hamblin ao amin'ny Martech Zone |
Lahatsoratra nosoratan'i Andy Hamblin
Andy dia tao amin'ny indostrian'ny ivelany nandritra ny 10 taona mahery, niasa tamin'ny fandaminana sy ny fividianana fampielezan-kevitra ary ny varotra. Ny CV-ny dia mandrakotra ny anarana malaza indrindra amin'ny orinasa ao anatin'izany ny Posterscope, JCDecaux ary ECNlive alohan'ny hidirana Signkick tamin'ny taona 2014. Mpisolovava mafana fo izy hampahafantatra ny haitao izay miasa amin'ny indostrian'ny afisy amin'ny tanjona hanatsarana ny fahombiazana sy ny fidiram-bola mitombo.
Talata, Novambra 1, 2016 Talata, Novambra 1, 2016 Andy Hamblin
Ny indostrian'ny dokambarotra Out of Home dia indostria goavana sy manambola. Amin'izao vanim-potoana misavoritaka nomerika izao, ny fifandraisana amin'ireo mpanjifa rehefa “mandeha” eny amin'ny habakabaka dia mbola mitazona lanja lehibe tokoa. Ny takelaka, ny fialofana amin'ny bus, ny afisy ary ny dokam-barotra dia ampahany amin'ny fianan'ny mpanjifa isan'andro. Manolotra fotoana tsy tambo isaina hanaparitahana hafatra mazava ho an'ny mpihaino mifandraika izy ireo nefa tsy hifaninana amin'ny dokam-barotra an'arivony maro hafa. Fa tsy mora foana izany